Xukuumada Soomaaliya oo bilowday bixinta Mushaaradka Shaqaalaha rayidka | KEYDMEDIA ONLINE
Xukuumada Soomaaliya oo bilowday bixinta Mushaaradka Shaqaalaha rayidka
Muqdisho (KON) - Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa Maanta Kormeer ku tagay Bankiga dhexe ee Soomaaliya waxaana maanta halkaasi ka socday lacag bixinta Mushaaraadka Shaqaalaha seddex Hay’adood oo Dawlada katirsan.
Wasiirka Wasaarada Maaliyada Somaliya Maxamuud Xasan Suleymaan oo hadal ka jeediyey gudaha Bankiga ayaa waxa uu sheegay inay Mashruuc mushaar bixin ah laga bilaabay Bankiga Dhexe ee Somaliya taasi oo ay ka caawineyso Dawlada Norway islamarkaana ay ku faraxsan yihiin qeybtii koowaad ay lacago ku qaateen barnaamijka la yiraahdo (Special Financy Facilaties).
Wasiirka maaliyada oo sii hadlayey waxa uu tibaaxay inay maanta si rasmi ah loo bilaabay qaab cusub oo mushaaraadka lagu siin doono shaqaalaha Dawlada Somaliya hay’adaheeda kala duwan.
“Bankigu maanta wuxuu bilaabay mushaar bixintii ugu horeysay ee oo laga bixinayo xisaabta mashruuca loo yaqaano Special Financial Facility (SFF), waana mashruuc ay iska kaashanayaan dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Norway oo muddo sideed bilood ah laga soo sahqeynayay” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.
Sidoo kale Ra’iisalwasaaraha Somaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ugu horeyn ka mahad celiyey intii soo agaasimtay mashruuca maanta bilowday ee shaqaalaha Rayidka dawlada ee lacagaha mushaaradkooda lagu siiyey.
Cabdi Faarax Saacid ayaa sheegay inay rajeynayaan bilowga barnaamijkaan inuu noqdo mid sil silad ah oo dib iskugu xiranta hormar uhorseeda Dawlada Somaliya si gaar ahna ugu mahad celiyee Dawlada Norway oo Wasaarada Maaliyada kala qeyb qaadaneysa bixinta Mushaarka Shaqaalaha Dawlada.